iOS9တွင်အသစ်နှင့်တိုးတက်လာသော Spotlight ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း ငါက Mac ကပါ
iOS9အသစ်နှင့်တိုးတက်လာသော Spotlight ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း
အသစ်က Spotlight ကို အတူလာခဲ့သည် iOS9အရင်ကထက်ပိုပြီးကမ်းလှမ်းထားတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad အတွင်း၌သာရှာဖွေမှုများပြုလုပ်တော့မည်မဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်အင်တာနက်ရလဒ်များ၊ အကြံပြုချက်များနှင့်ထို့ထက်ပိုသောအရာများကိုပေးနိုင်သည့် ပို၍ အင်အားကြီးမားသည့်ရှာဖွေရေးယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီအင်္ဂါရပ်အသစ်တွေအားလုံးကိုဒီနေ့ပြန်သုံးသပ်မယ်။
iOS9ကိုမီးမောင်းထိုးပြ
iOS 8 အထိ, Spotlight ကို အက်ပလီကေးရှင်း၏တည်နေရာ၊ အီးမေးလ်၊ သီချင်းစသည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုသင်၏စက်၏ဒေတာအတွင်းမှရှာဖွေရန်ကန့်သတ်ထားသည်။ ယခု၊ Spotlight သည်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၊ သတင်းစင်တာတစ်ခု၊ သင်အနီးအနားရှိအရာကိုပြသသည့်တည်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်နှင့် Siri အကြံပြုချက်များပါဝင်သည်။ အသစ်ပြန်လည်လုပ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သမျှအားလုံးကိုအမြန်လေ့လာကြပါစို့ Spotlight ကို iOS9၏။
ရယူရန် Spotlight ကိုပထမဆုံး home screen မှညာသို့ပွတ်ဆွဲလိုက်ရုံဖြင့်၊ ပထမ screen မတိုင်မီတည်ရှိသော "one screen" တစ်ခုဖြစ်သည်။ အပေါ်ဆုံးတွင်ရှာဖွေမှုဘားကိုတွေ့လိမ့်မည် Spotlight ကို သူ့ဟာသူ ၎င်းအောက်တွင်သင်အများဆုံးအသုံးပြုနေသောအဆက်အသွယ်များနှင့်မကြာသေးမီကသင်အသုံးပြုခဲ့သောအပလီကေးရှင်းများပါ ၀ င်သည့် Siri ၏အကြံပြုချက်များသည်သင်အများဆုံးအသုံးပြုသောအရာများကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အတွက်အားလုံးဖြစ်သည်။
သင်၏မကြာခဏအဆက်အသွယ်များထဲမှတစ်ခုကိုသင်နှိပ်သောအခါ၊ ထို မှနေ၍ သင်ဖုန်းခေါ်နိုင်သည်၊ စာတစ်စောင်ပို့နိုင်သည်၊ စတင်နိုင်သည် FaceTime သို့မဟုတ်ဟုပြောသည်အဆက်အသွယ်များ၏သတင်းအချက်အလက်စာရွက်ကိုရယူပါ။ အကယ်၍ သင်မကြာသေးမီကအသုံးပြုခဲ့သောအပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှတစ်ခုကိုနှိပ်လျှင်၎င်းသည်တိုက်ရိုက်ဖွင့်လာလိမ့်မည်။
ပြီးရင်ငါတို့ရှာမယ် အကြံပြုချက်များ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိတည်နေရာနှင့်နီးသောနေရာများဖြစ်သောအရက်ဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကဖေးများ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုဌာနများ။ ။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်မှာသင်၏အသုံးပြုမှုသည်သင်၏အလေ့အထနှင့်နေ့အချိန်ပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်အလုပ်သွားသောအခါနံနက်ခင်း၌သင်၏ကားကိုအစဉ်အမြဲလောင်စာချနေလျှင်ဤအကြံပြုချက်သည်ထိုအချိန်တွင်ပေါ်လာမည်၊ သို့သော်မွန်းတည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။ သင်အိုင်ကွန်ကိုထိလျှင် မြေပုံ အဲဒီအကြံပြုချက်တွေကိုသင့်ကိုပြပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သတင်းအကြံပြုချက်များကြောင့်နောက်ဆုံးဖြစ်ရပ်များနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်အောင်သင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သူတို့ခဏပေါ်မလာလျှင်မအံ့သြပါနှင့်။ ဤအကြံပြုချက်များသည် app နှင့်ဆက်စပ်နေသည် သတင်း အရာ, ယခုအချိန်တွင်သာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်၎င်းကိုသင်လိုချင်ပါကသင်၏ကိရိယာ၏ဒေသကိုယူအက်စ်သို့ပြောင်းပြီးချိန်ညှိချက်များမှပြောင်းလဲလိုက်ရုံဖြင့်၎င်းသည်သင်၏မူလမြင်ကွင်းနှင့်၎င်းနှင့်အတူချက်ချင်းပေါ်လာလိမ့်မည်။ Spotlight ကို.
သို့သော်သကဲ့သို့ သူတို့ရည်ရွယ်သည် iPhone Life ကနေ၊ အရေးအကြီးဆုံး update ကို Spotlight ကို ရှာဖွေရေး function ကိုဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPad တွင် Google search ကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်ကို Apple ကဖယ်ရှားလိုသည်၊ ထို့ကြောင့် Spotlight ရှာဖွေမှုမှရလဒ်များကိုလျှောက်လွှာ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်အကြံပြုချက်၊ မှတ်စုများမက်ဆေ့ခ်ျများ၊ တေးဂီတများ…ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့်အားရွေးချယ်စရာသုံးခုပေးလိမ့်မည်။ အင်တာနက်ကိုရှာဖွေခြင်း၊ App Store နှင့်မြေပုံများကိုရှာဖွေခြင်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » iOS ကို » iOS9အသစ်နှင့်တိုးတက်လာသော Spotlight ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း
မေးခွန်းတစ်ခု - ကျွန်ုပ်မှာ iPad Mini ရှိတယ်၊ iPhone လိုပဲ Spotlight ဟာညာဘက်ကိုရွေ့လျားနေပုံမပေါ်ပါဘူး။ သူကအရာရာတိုင်းကိုကြိုးစားပြီး၊ scratch မှပြန်လည်စတင်သည်၊ ပြန်လည်စတင်သည်စသည်ဖြင့် ... ဟုတ်ပါတယ်။ ရှာဖွေရေးလိုင်းအောက်သို့လျှောကျနေသည်။ သို့သော်အခြားဘာမျှမရှိသေးပါ၊ လတ်တလောအဆက်အသွယ်များ၊ အပလီကေးရှင်းများမရှိပါ။ ကိရိယာနှစ်ခုလုံးသည်ဆက်တင်များတူညီကြသည်။
မဆိုအကြံပြုချက်များ, စိတ်ကူးများ ... ? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးစားပါတယ်
MacPhun သည်၎င်း၏ Creative Kit ကို OS X El Capitan ရှိဓာတ်ပုံများအတွက်ထပ်တိုးထပ်တိုးများဖြင့်စတင်ခဲ့သည်
iPhone6နှင့် iPhone 6S အကြားကြီးမားသောခြားနားချက်များ